Hunhu uye Kuvimba muBlogging | Martech Zone
China, Gumiguru 30, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Ndiri kutarisa nhau nhasi uye pane zvakawanda zvekutaura nezve iyo yakamonyoroka maonero ezvematongerwo enyika uye nemumiriri wega wega akaunzwa uye kuferefetwa. Midhiya enhau ichiri kutamba basa rakakura musarudzo zvakare, sezvo isu tichiona mamirioni emadhora achikandwa mukushambadzira kweterevhizheni. Isarudzo yakasviba uye imwe yandichafara kuona kupera kwayo nekukurumidza.
Iko kukuratidzira kwemushandirapamwe kwave kuri kweInternet uye kugona kwevavhoti (kana vachinetseka kuishandisa) ku tarisa chokwadi kuti mumwe nemumwe wevamiriri (chero mumiriri, kwete Mutungamiriri chete). Ini ndinotenda ma blogger anga aine kutendeseka, kujeka uye kufumura nhaurirano nezvevamiriri kupfuura chero terevhizheni imwe chete.
Ndakave nekukurukurirana kwemweya neshamwari dzangu pamhepo uye kure nezve mushandirapamwe. Kunyangwe ini ndichiona zvimwe zvine hunyanzvi, mazwi ekuzvidza anobuda nguva nenguva, avo vanhu vandino twitter uye blog navo vanondiremekedza uye ndinovaremekedza, zvisinei nesarudzo yatiri kuita. Izvo zvakanaka.
Icho chokwadi ndechekuti iyo Internet, uye kunyanya blogging, yaunza chiso chemunhu kune kutaurirana kwazvino. Tingave tisati tamboonana, asi wakasvika pakundiziva kuburikidza nebhurogu yangu. Vamwe vanhu vaenda, asi avo imi vakanamatira panhu vanoratidzika kunge vanofarira zvandinotaura uye ndinoda chokwadi chekuti ini ndinokwanisa kugovana zvandinowana nemi. Pane kuvimba pakati pedu!
Vazhinji venhau vakashanda nesimba mukumisikidza maonero akashatiswa evatungamiriri vedu vezvematongerwo enyika, bhizimusi hombe, uye vavengi vedu kunze kwenyika. Ini ndinofunga zviri nyore kumanikidzwa kuvenga kana pasina munhu kune rimwe divi. Mazhinji macaricature atinoona paterevhizheni (uye ndinobvuma, Youtube) akagadzirwa nenzira yekuti zviri nyore kusada kana kusaremekedza mumwe munhu.
Mhinduro, mumaonero angu, ndeyeku blog. Ndinoshuva dai vatungamiriri vedu vezvematongerwo enyika vakanyora mablog (vasina vavaki vavo vachinyora uye kusefa zvirimo). Ndinoshuva dai vedu vatungamiriri vebhizimusi blogged. Ndiri kuda kuziva zviri mumisoro yevakomana vaya paExxon. Ini ndoda kuziva kuti nei blog post inotsoropodza bhangi ichienda isina kupindurwa kweanopfuura gore. Ini ndoda kuziva kuti nei makambani anotenga moge achisarudza kufanotaura pane kugadzirisa dzimba dzevatengi vavo.
Chidzidzo chenguva ichangopfuura chinopa humbowo hwekuti mablogiki inyanzvi yekuvimbika yevatengi. Ndinoziva kuti makambani anongova nechinangwa chekuita mari. Kana makambani paanoona kuti mari ichauya chaizvo pavanoratidza hunhu uye kujekesa, zvakadaro, vacharamba vachidzivirira mabloggi?
Iyo Yemberi ndeyeBlogging
Ini ndinotarisira mberi, mumakore mashoma, kungoshanda chete nemabhizinesi ayo blog. Ini ndinotarisira kungovhota chete kwevamiriri iyo blog. Ndiri kutarisira kutsigira makambani uye vezvematongerwo enyika vanogona kuvimbwa uye vasina nyadzi kuratidza hunhu hwavo. Ini ndinotarisira kumablogiki akatakura huremu hwakawanda kupfuura kushambadza, kana mari yakashandiswa, kana kunyangwe midhiya midhiya.
Ini ndinongovimba kuti Google inogona kuenderera pamwe neese hurukuro!
Tags: wedzera kubatanaAnalyticszororo maitiroKushambadzira Infographicskudzorerasmart banner
Gumiguru 31, 2008 pa 7:18 AM
Pfungwa dzakanaka, Doug. Gore rino ndakaita huwandu hwakanaka hwekutsvaga online ndisati ndaita sarudzo maererano nevaya vanomhanyira kumahofisi emunyika nemunharaunda. Ndakawana huwandu hwakanaka hweblog zviwanikwa neruzivo kuti vandibatsire kuumba yangu yega maonero. Ini ndainyanya kufadzwa nehuwandu hweruzivo rwunowanikwa pane vavhoterwa vemo kuburikidza nemablog. kune mamwe mazwi emuno anofarira kwazvo anoda kunzwika. Sezvawataura, isu hatisati tasvika padanho rekuti vavhoterwa chaivo vari kublogi, saka isu tinofanirwa kugadzirisa mazwi evatsigiri vavo nevanozvidza.
Gumiguru 31, 2008 pa 8:51 AM
Doug, iri rakanakisa post.
Parizvino, nerudzi rwakanamatira mumatope ehumwe hutungamiriri hweMutungamiri, zvinorira kunyanya chokwadi. Ini ndaneta nevanhu vanodavira runyerekupe uye zvirevo zvinovimbwa ne "michina yedu yezvematongerwo enyika" yemazuva ano. Saka vanhu vazhinji vandinotaura navo vanotenda makuhwa pane kuti vazvitsvagire uye vadzidze chokwadi chavo vega. Chaizvoizvo, imhosva yedu pachedu kuvimba zvakanyanya nemass media kwenguva refu kwazvo. Asi izvo zviri kuchinja, handizvo here?
Ndiri kuonga simba re internet uye nekupa simba kwayinoita yakatendeseka, vakangwara blog vanyori vanogona kuvhura maziso edu. Ehe, panogara paine vasina kuvimbika mabloggi vanokanganisa chokwadi cheavo ajenda, asi isu tinotora zvakanaka nezvakaipa. Zvisinei, ini ndinotenda mablog anoramba achichinja mashandisiro anoita nhau uye chokwadi nemafungiro zvakagovaniswa nevanhu uye pakati peveruzhinji.
Kana zvasvika mune zvematongerwo enyika, ndinotarisira kuti zvinogona kukonzera iyo US kuti ishanduke kubva kune yedu yechinyakare 2 bato rezvematongerwo enyika (rakaoma kuruboshwe uye rakaoma kurudyi) kuenda kune yakazara mapato emapato ezvematongerwo enyika anomiririra akaenzana maonero pakati pekunyanyisa. Ini ndinofanirwa kufunga kuti kune huwandu hwakawanda hwekuenzanisa zvine mwero maAmerican ayo anogona kusadonha zvakaringana mumatare akaomarara-akaomarara eDemocratic kana yakaoma Kusvika parizvino, mamwe mapato ezvematongerwo enyika akaita seyakagadzirwa magreen nema libertarians haasati awana izwi rakakosha, asi internet inogona kuita mutsauko. Unofungei? Tinogona kuve neayo chaiwo 3 kana mana mapato bato gumi nemaviri makore kubva ikozvino?
Mbudzi 1, 2008 na12: 06 PM
Zvinoshamisa kuti vatungamiriri vangani vasinga blog. Vanofanira kutya kuita chimwe chinhu chisina kunaka. Ini ndinotenda kuti stats izvozvi ingangoita% 12 yemakambani mazana mashanu ane blog. Izvo zvinosiririsa.
Ndiri kutarisira kuona mamwe mabloggi kubva kumakambani nevatungamiriri vekambani. Ini ndinofunga ndiwo marudzi ezviito anozovabatsira kukudziridza kuvimba uye hukama hwakadzama nevatengi. Ini handizive nei vasingatore izvi!
Dec 17, 2008 pa 5: 02 AM
Mushandirapamwe we? MASHOKO ANOGONESA? MEDIA?
Mukumhanya kwekunakidzwa uye muhombe purofiti, takashandisa kukanganisa chokwadi.
Isu tinokupa iwe zvimwe zvisina kunaka chokwadi izvo zvisiri isu isu uye isu tinorwa nazvo!
1. Iyo mharidzo, ine yakajairwa munhau mishumo yezvinhu zvakashata, zvakadzorwa zvataurwa, kutora mativi kana kushatirwa.
2. Kuratidzwa kwemufananidzo weRomania muNyika kuburikidza nekuratidzwa kwemafungiro asina mvumo ayo anonyora nyika yese mushure mekuita kwevamwe maRomania, kana kutonyanya, kwevamwe veRromi (Gipsy) vane matambudziko nemutemo.
3. Kudzokorora zvakafanana negatives nhau mune yakakura kana diki nguva yenguva.
4. Kuwedzeredzwa kwenguva yezvikanganiso, sekunge mutemo wekutevera kana hunhu hwenyika.
5. Kutora ruzivo rwusina kutariswa kubva kuvanhu runofarira uye vari pasi pekatatu akaora? murume wezvematongerwo enyika? murume webhizinesi? mumiriri wezvemidhiya, izvo zvinodzora kutarisisa kubva kune izvo chaizvo zvikonzero zvezviitiko.
6. Kazhinji, tinoona kutepfenyura kusiri kwehunyanzvi sevanopokana nevamwe vatambi, vagari vane matambudziko nemutemo, vane mazwi mashoma, uko kunoziviswa ruzivo rwakanangana nehupenyu hwepachivande kana hweyedzo. Isu tinokuyambira kuti ruramisiro haigone kuitwa neterevhizheni uye kana kukurudzira nzira yekuferefeta kuburikidza nemhando dzese dzekufambisa kana kukanganisa zvinoti iko kuferefeta kwenhau. Isu tinozvibvunza isu pachikonzero chakanaka, kana iyo mhoro-midhiya isina kusimudzira mutengi wayo capitalism.
7. Kuti tizvidzivirire isu pachedu mukuedza kusakoshesa masisitimendi ehurumende, kukurudzira mhirizhonga nemapoka anokosha ane chinangwa chekuparadza simba uye nemvumo yenyika yeRomania nyika seyakanaka uye ine hutongi hwegutsaruzhinji.
8. Sekuziva kwedu, mutemo wakakosha wehurumende, Romanian Constitution, inotaura zvakajeka pachinyorwa 30, ndima 6: rusununguko rwekutaura harugone kukanganisa chiremerera, kukudzwa, hupenyu hwepachivande hwemunhu uye kana kodzero yemunhu ?; ganhuro 7:? zvinorambidzwa nemutemo kusvibisa nyika nerudzi, kukurudzira chiito chemhirizhonga, kuvenga nyika, dzinza, vanhu kana chitendero, kukurudzira kusarura, kumatunhu
kupatsanurwa kune mhirizhonga yeruzhinji, zvakare kuratidzwa kunonyadzisa, uko kunopesana nehunhu hwakanaka?. Zvakare muchinyorwa 31, ndima 3, inoti iyo? Iyo kodzero yeruzivo haigone kukanganisa kuyerwa kwevechidiki kana kuchengetedzeka kwenyika?
9. Muchirevo chechinyorwa chino, tinokurudzira kuti tiumbe muviri une masimba ekutonga? National Council Against Manipulation?, Seyiripo, inonzi? National Council for Disproof of Discrimination ?, inozove nechinangwa chekuodza mwoyo vezvenhau, kufungidzira uye pfungwa hondo, kurambidza kudhakwa kwemaonero eruzhinji kuburikidza nedisinformation, asiwo ruzivo rwakawanda.
10. Tinozvitaurira kuMutungamiriri weRomania, VaTraian Basescu, kuti vashandise kodzero dzeConstitutional, tichitaura nezvechinyorwa 30, ndima 5, icho chinoti:? Mutemo unogona kumanikidza vezvenhau chisungo chekuzivisa veruzhinji sosi ye mari?.
Paramende ichave nebasa rakakura rekugadzirisa nekupedzisa mutemo wekuchengetedza ruzivo, nekubvunzurudza? Veruzhinji uye vevadzidzi?
Maonero evanhu vanofarira mumushandirapamwe uyu achaburitswa muRomania nekunze.
Mutungamiri weMAS COMMUNICATION SIMBA